Uterine Fibroids ၏ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ကုသမှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများ။
Uterine Fibroids - ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ကုသမှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများ။
ဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်အမျိုးသမီးတိုင်းသည်ကိစ္စတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် fibroid, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသူရှိသူတစ်စုံတစ်ယောက်သိတယ်။ Fibroids သည်အလွန်အဖြစ်များသည် လိင်အင်္ဂါ၏အကျိတ်များဆုံး အဓိကအားဖြင့်နှစ် ၃၀ မှ ၅၀ ကြားအကြားမျိုးပွားနိုင်သောအသက် ၇၀% အမျိုးသမီးများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည် သွေးဆုံး.
ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ fibroids, fibroids o myomasfibroid အကျိတ်ပြန့်ပွားတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ညင်သာပျော့ပျောင်း သားအိမ်၏အလွှာတ ဦး တည်းကိုခေါ် သေးသေးလေး။
၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့် fibroids ၏အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုမသိရသေးပါ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်တစ် ဦး တုံ့ပြန်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူကြောင်းကိုငါသိ၏ ဟော်မုန်းမညီမျှမှုပရိုဂျက်စထရွန်ကိုထုတ်ပေးသည်။
တစ် Uterine Fibroma ၏ရောဂါလက္ခဏာများ
တစ် ဦး ၏ရောဂါလက္ခဏာများ သားအိမ် fibroma
fibroids အများစုသည်လုံးဝဖြစ်ကြသည် အချိုးမညီ, ultrasound အပေါ်အခွင့်အလမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ရောဂါတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာမိန်းမအများစုသည်အျခားရောဂါများကိုစုံစမ်းရန်သို့မဟုတ်တင်ပါးဆုံတွင်းရှိ ultrasound ပြုလုပ်သောအခါ fibroid ရှိကြောင်းကိုသာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် မီးယပ်။
ထို့ကြောင့် fibroid သည်ရောဂါလက္ခဏာများမပြသနိုင်သေးဘဲရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူပြန်လည်ထူထောင်ကာအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ကျန်ရှိနေသေးသောဘ ၀ အတွက်မူတိတ်ဆိတ်စွာနေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဤသည်မှာအမျိုးသမီးများ ၇၅% သောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည် fibroids ။
ကျန်တဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ myoma နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတချို့ရှိပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်တော့သူတို့ဟာနေ့စဉ်ဘဝအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းအနည်းဆုံးလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ The အသုံးအများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
ဤအရာအားလုံးသည် fibroids များကိုကုသရပြီးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရမည်ဖြစ်သည်။
ပုံရိပ်များမှတဆင့် fibroid ၏ရောဂါလက္ခဏာနှင့်ဖော်ပြချက်အရဆရာ ၀ န်နှင့်လူနာသည်ချက်ချင်းချဉ်းကပ်ရန်လိုအပ်မလား၊ သို့မဟုတ် fibroid နှင့်အတူတွေ့ရှိမှုသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ ဦး မည်လားသို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်နိုင်မလားစသည်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
အတွက် ကိုယ်ဝန်မဆောင်လိုသောအမျိုးသမီးများ အခုသင်နှင့်သင်သည်ရာသီလာခြင်းတိုးပွားလာပြီး၊ ဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်သည့်အတွင်းပိုင်းကိရိယာ ၎င်းသည်လအနည်းငယ်ပြီးနောက်ရာသီလာခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်သို့မဟုတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။
အာရုံစူးစိုက်မှု: ကဲ့သို့သောအခြား IUDs ကွေးနီသူတို့ကရာသီလာခြင်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သောကြောင့်, ညွှန်ပြကြသည်မဟုတ် ကြွက်တက်ခြင်း.
အတွက် မျိုးမပွားနိုင်သည့်အမျိုးသမီးများ, အ fibroid အတွက်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း နှင့်သန္ဓေသား၏ implantation, အများဆုံးအကြံပြု option ကိုဖြစ်ပါတယ် ခွဲစိတ်ကုသမှု အဆိုပါ fibroid ၏ဖယ်ရှားရေးနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်).
ကျနော်တို့ကသို့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ် အမျိုးအစား ၄ မျိုး သင့်ရဲ့အဆိုအရ တည်နေရာ (နှင့်အမှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အန္တရာယ်များ):
Subseroso: ၎င်းသည်သားအိမ်နံရံ၏အပြင်ဘက်တွင်ဖြစ်ပြီးသားအိမ်အပြင်ဘက်တွင်ထွက်သည့်အထွက်ဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ပြင်ပပိုမိုသောကြောင့်၊ မ ၀ င်ပါနဲ့ မျိုးပွားခြင်း သို့မဟုတ်သန္ဓေသား၏ implantation ။ သူတို့ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင် ( ထက်ပို5စင်တီမီတာ ), သားအိမ်ကျုံ့အတွက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆီးအိမ် (ဆီးအရေးပေါ်) နှင့်အူအဖြစ်ကပ်လျက်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ, အပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်အပြင်, ကလေးမွေးဖွားအလျှော့ပေးလိုက်လျောနိုင်ပါတယ်။
Intramuralကြွက်တက်ခြင်းအပြင်ကြွက်တက်ခြင်းအပြင်အမြင့် ၅ စင်တီမီတာအမြင့်ရှိသည့်အချိန်တွင်သားအိမ်၏ပုံသဏ္distာန်ကိုပျက်ပြားစေသည်။ ခန္ဓာဗေဒ၏ပုံပျက်မှုရှိသည့်နေရာများတွင် fibroid ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် intramural ၏အခွင့်အလမ်းကိုလျှော့ချ ကိုယ်ဝန်.
နိဗ္ဗာန်၎င်းသည်သန္ဓေသား၏အတွင်းအကျဆုံးနံရံတွင်တည်ရှိပြီးသန္ဓေသားလောင်း၏ endometrium အောက်တွင်ရှိပြီးသန္ဓေသား၏လိုင်ခေါင်းတွင်ကြီးထွားလာသည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့် fibroid အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် ပိုပြီးသွေးထွက်ခြင်းနှင့်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်.
una ခန္ဓာကိုယ် အဲဒါကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်နိုင်တယ်။ အနည်းဆုံးထိုးဖောက်တစ် ဦး မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် ခန္တီပါရမီဝင်ရောက်ရသော 4-5 စင်တီမီတာအထိ submucosal fibroid ရန် လူနာ၏အသားအရေတွင်သားအိမ်ခေါင်းမှ ဖြတ်၍ ဖြတ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်ပါ။
လျှပ်စစ် scalpel စနစ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် hysteroscope ကိုယ်နှိုက်နှင့် submucosal fibroids များကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးရုံတွင်ပြုလုပ်သော်လည်းပြင်ပလူနာတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုကာလသည်အေးဆေးငြိမ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးအများစုသည်နာကျင်မှုမခံစားရပါ။
သို့သျောလညျး hysteroscopy သည်သေးငယ်သောသားအိမ်အခေါင်းပေါက်အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော submucosal fibroids ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများကိုသာဖြေရှင်းသည်လမ်းကိုယ်နှိုက်၏နည်းပညာကန့်သတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
fibroids ၏တိကျသောအကြောင်းရင်းကိုယခုအချိန်အထိမသတ်မှတ်ရသေးသဖြင့်၊ fibroids ၏ကြီးထွားမှုသို့မဟုတ်အသွင်အပြင်ကိုအတိအကျတားဆီးရန်နည်းလမ်းမရှိကျွန်ုပ်တို့မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကာကွယ်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ ဤအမှုများကြားမှ, fibroids, အစားအစာနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးဖို့လမ်းညွှန်ပြစေခြင်းငှါအချို့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အလေ့အကျင့်များအကြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာပေထဲမှာအများအပြားအသင်းအဖွဲ့များရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတချို့ consejos Fibroids ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတယ်၊ ပြီးတော့အနည်းဆုံးသင့်ကိုကျန်းမာစေပြီးကလေးမွေးဖွားမှုကိုတိုးပွားစေလိမ့်မယ်။
ကာယလေ့ကျင့်ခန်း: အထိုင်များနေသောဘဝပုံစံကိုစွန့်ခွာခြင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်လုံးတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုလျော့နည်းစေပြီးညင်သာပျော့ပျောင်းသော၊ premalignant နှင့်ကင်ဆာအကျိတ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
ကျန်းမာသောအစားအစာအသားနှင့်အဆီများများစားစားစားသောအမျိုးသမီးများသည် fibroids ဖွံ့ဖြိုးရန်များကြောင်းလေ့လာမှုများကဖော်ပြသည်။ ဘယ်သူတွေများများစားကြတယ် အသီးအပွအသားများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုမြှုပ်ထားပါ။ သားအိမ်သားအားဤဒဏ်ရာများမှကာကွယ်ရန်မြင့်မားသော antioxidants များရှိသည်။
မြင့်မားသော glycemic အညွှန်းကိန်းနှင့်အတူအစားအစာများ- သကြားလုံးများ၊ ပေါင်မုန့်များ၊ ခေါက်ဆွဲများ၊ ကွတ်ကီးများနှင့်သန့်စင်ထားသောသကြားဓာတ်တို့သည်ခန္ဓာကိုယ်၏ဟော်မုန်းဆိုင်ရာအိမ်တွင်းအခြေအနေကိုမညီမျှစေဘဲ fibroids ဖြစ်နိုင်ချေကိုမြင့်တက်စေသည့်အင်ဆူလင်ဓာတ်တိုးစေပါသည်။
အရက်သုံးစွဲခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပါ- မြင့်မားသောဆေးများသောက်သောအခါအရက်သည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမည်သည့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအတွက်မဆိုမကောင်းသောကြောင့်ဆဲလ်များပြန့်ပွားခြင်းနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးနောက်ဆုံးတွင် fibroids ကဲ့သို့သောအကျိတ်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ထံပုံမှန်သွားပါဖြေ။ ။ fibroids (သို့) အခြားမီးယပ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မေးကောင်းမေးနိုင်သည့်မေးခွန်းများအပြင်။ သားဖွားမီးယပ်အထူးကုသည်သင်လိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုစစ်ဆေးမှုအားလုံးကိုပြုလုပ်ပေးပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးထွက်ခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးနာကျင်ခြင်း၊ ၀ မ်းနည်းခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်သို့မဟုတ် fibroids နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားရောဂါလက္ခဏာများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အစောပိုင်းရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးကုသမှုကိုပြုလုပ်ရန်သေချာစေလိမ့်မည်။
အဆိုပါ fibroid ၏တည်ရှိမှု ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ အမျိုးသမီး၏။ လက်တွေ့တွင် fibroid သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကိုခက်ခဲစေသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ယင်း၏ထုတ်ယူပြီးနောက်။ သို့သော်မကြာခဏဆိုသလို fibroid သည်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းအတွက်အမှန်တကယ်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုပြောရန်ခဲယဉ်းပြီး၎င်းသည်သူမ fibroid ကိုထိန်းသိမ်းထားသည့်တိုင်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှကိုယ်ဝန်မရနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်သုတေသနပြုချက်အရ fibroid သည်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပွားမှု၏ ၄% မျှသာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၉၆% သောရောဂါများသည် fibroid ၏တည်ရှိမှုကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်၊ fibroma သည်ကိုယ်ဝန်ကိုတားဆီးသည့်တစ်ခုတည်းသောသို့မဟုတ်အဓိကအချက်မဟုတ်ပါ။
သင်၏အပေါ်မူတည်ပြီး fibroid သည်ကလေးမွေးဖွားမှုကိုနှောင့်ယှက်သည် အရွယ် y တည်နေရာ.
အ fibroids submucosal မည်သည့်အရွယ်အစားနှင့် ကြီးမားသော intramural fibroids, ထက်ပို4သို့မဟုတ်5စင်တီမီတာ, အများဆုံးဆက်စပ်ဖြစ်ကြသည် မျိုးပွားခြင်း။ များသောအားဖြင့်ဤသည် generate မှုများထပ်တလဲလဲကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ သားအိမ်ခန္ဓာဗေဒကိုပုံပျက်နှင့် endometrium အတွက်သန္ဓေသား၏သင့်လျော်သော implantation တားဆီးအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ လေ့လာမှုများအရဤကိစ္စများတွင်နှုန်းသည်အမှန်တကယ်ရှိကြောင်းပြသသည် ပိုပြီး baja ကိုယ်ဝန်၏သန္ဓေသား implantation နှင့်ကိုယ်ဝန်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်။
ဤအရာအလုံးစုံကိုစဉ်းစား, သေးငယ်တဲ့ intramural fibroids နှင့် subserosal fibroids ကလေးမွေးဖွားဖို့ဆီလျှော်စဉ်းစားနေကြသည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည် endometrium ကိုမထိခိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
Laryngectomy - ။
CO2 လေဆာနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲတိုက်ရိုက် microlaryngoscopy
Paroxysmal အနေအထား vertigo - ။
သင်၏ ဦး နှောက်ကိုလေ့ကျင့်ရန်အတွက်လျှောက်လွှာ ၁၂ ခု
အသံကို Google Translate တွင်မည်သို့ဘာသာပြန်ရမည်နည်း။
"စတော့ဟုမ်း Syndrome" ဟူသောဝေါဟာရကိုပေါ်ပေါက်စေသောပြန်ပေးဆွဲမှုသမိုင်းအကြောင်းကိုလေ့လာပါ
Google Translate ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ [လမ်းညွှန် ၂၀၂၀ အပြီးသတ်]
Google Translate ကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်ပုံဖြင့်မည်သို့ဘာသာပြန်ရမည်နည်း။
အကောင်းဆုံး 40 anime ကိုကြည့်ပါ
ဂူးဂဲလ်နဲ့မြေပုံများလား။ ဘယ်လို Spotify မှတဆင့်ထွက်ရှာပါ
quarantine စဉ်အတွင်းစိုးရိမ်စိတ်ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ 10 applications များ
အခမဲ့ MP3 ဂီတကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဆိုဒ်များ
နာမည်အကြီးဆုံး Nintendo Switch ဂိမ်းများ
Google Translate ဖြင့်ဂူးဂဲလ်မြေပုံများ - အဲဒါကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 500 အကြား bubonic ကာလနာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသလဲ
ဘရာဇီးလက်သင်္ကေတပြဘာသာပြန်ဆိုသူ - ဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း။
Badoo - လူတိုင်းအတွက်ချိန်းတွေ့ခြင်း - app ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
မေယာန်သည် ၂၀၂၀၊ ဇွန်လတွင်ကမ္ဘာကြီး၏အဆုံးကိုကြိုတင်မခန့်မှန်းခဲ့ပါ။ နားလည်သည်!
ကိုယ်အလေးချိန်ကျ အစာ အန်းဒရွိုက် Animales ဖိုင်များကိုဖျက်လိုက်သည် သက်သာချောင်ချိရေး စကားဝှက်များ ကိုယ်ခန္ဓာ သိချင်စိတ် ရှာဖှေတှေ့ အစားအသောက်များတွင် ကွဲပြားခြားနားမှု ကိုယ်ဝန် ရောဂါများ မိသားစု အဆုံး အသုံးပြုနိုင်မှု ပုံပြင် ရောဂါကူးစက်မှု အိပ်မက်စကားပြန် iphone မိုဘိုင်းဂိမ်းများ သားဖွားမှု Minecraft ဂီယာမော်တာများ Browsers Netflix နဲ့ အစာအာဟာရ ဆုတောင်းချက်များ ခွေး ဆေးဖက်ဝင်အပင် ကျန်းမာခြင်း အမည်များ၏အဓိပ္ပါယ် အမျိုးအစား လူကြိုက်များသောဆိုဒ်များ အစားအစာဖြည့်စွက်မှု ရောဂါလက္ခဏာ A မှ Z သို့ရောဂါလက္ခဏာများ Tarot ဂိမ်းကစားနည်းများ ဂိမ်းတွေကက ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ပါ ဗွီဒီယိုနှင့်တီဗီ Whatsapp အာဖရိကတိုက်
Facebook က ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့။
Instagram ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံများ!
Youtube ကို ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုပါ။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏ cookie ဆက်တင်များသည် "ခွင့်ပြုထားသော cookies" ကိုပြုပြင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသော browsing အတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ သင်သည်သင်၏ cookie ဆက်တင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ဆက်၍ သုံးပါကသို့မဟုတ်“ Accept” ကိုနှိပ်ပါကသင်၏သဘောတူမှုကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။